Mai Chibwe VekwaZimuto: Kugeza mese mubhavhu kana shawa
Ndoda kumbotaura nezvekugezesana. Mubhavhu munotsvedza saka munonetsa kurhojerana mo asi mushawa mvura ichinaya muri nani, makatomira nemakumbo matatu romukadzi rimwe chete emurume maviri. Ndichatsanangura.
Zvinhu zvakawanda zvinoitwa navanhu vaviri ava vachangoroorana kana kuti vachiri mukomana nomusikana zvinoita kuti vahwe rudo. Dai zztaingozoti tava nomusha wedu toramba tichiita zvinhu izvi musha waiita musha une rufaro chose. Unoona vanhu
Vachifamba vakabatana maoko
Vachipurudzirana magaro mukicheni,
Vachibatsirana kucheka hanyanisi kana umwe avhakashira umwe,
Vachiudzana zvaitika pa Bus Stop.
Vachitarisana mumaziso vachinyemwererana
Vachigarana pamakumbo vachirezvana
Zvese izvi kuita sokuti vane nguva yakawanda. Kungozoti varoorana vati garei garei, unoona zvese zviya zvaivafadza pamoyo zvichivashaisa hope hazvichina anoita. Ko kana zvakanaka kudai zvirizvo zvakaita kuti umude kusvika pakuroorana mukaudzana kuti todanana kusvika parufu, ko nhasi zvaendepi? Mukadzi akagara murume pamakumbo kwahi uri kundidherera, Murume akabata magaro emukadzi wake, oudzwa kuti chimwe nechimwe chine nguva yacho asi kare aichiti akadaro opiwa kisi ne nyemwerero.
Vanhu dzokerai kunoita zvamaichita meser kare kwenyu muchangodanana. Funga zvinhu zvaikudziisa moyo uchiti wasiya musikakana/mukomana wako woenda kumba kwako uchimufunga kuita sokuti aenda kusingadzokwi, Chii chaiita kuti umufonere uchimuudza zvinhu zvisina kana basa kunhoti uhwe hwi rake. Asio nhasi womuudza kuti chimwe nechimwe chine nguva yacho.
Nyaya yokugezesana iri pane zviitwa zvomumba menyu. Zvakafanana nezviya zvainokupai mufaro muri mese. Zvinokupai nguva iya yavanoti QUALITY TIME muri mese. Mukajaira kuwana QUALITY time musati mava nemwana munoona upenyu hwenyu huri hwekugarofadza.
Kana umwe wenyu azadza mvura mubhavhu, ngaachiisawo zvinonhuwira imomo. Moenda mese mubhavhu renyu mogara mo muchiita nyaya mushina hembhe. Murume anotaridzawo rudo nokugara kumusoro kune matapu emvura. Bhavhu rinokwana vanhu vaviri kana mune miviri yeavhareji.
Kana mune shawa ndiyo iri nani kupinda mese. Kunaya kwemvura unodziya pamuviri nokuona chombo chomurume kunoitisa zemo. Mapinda mushawa, Tosa sipo nesipanji ugezese murume musana , mafidzi, makumbo, zvese. Wasvika pamweri isamhanyamhanya, tora nguva uchigezesa uku mvura ichinaya. Ramba uchitaura nyaya. Kweva ganda rechombo kutaridza musoro, wogezesa zvakanake. Ipapo anenge ati twii kare.
Wapedza mupewo sipanji nesipo achitanga kukugezesawo. Anoita mafudzi mazamu. Dumbu. Magaro,Kotama awane pokugezesa, patsanisawo makumbo agezese pakati nesipanji . Ramba uchiita nyaya naye. Torai nguva. Muudze pekugezesa nokukwiza.
Chibvisai sipo nemvura iri kunaya iyi. Kana shawa yenyu ichikwanisa kusimudzwa, tora udire murume mvura nayo ubvise sipo. Ukasvikawo paya pane response isa mvura ipapo sipo ibve yese. Woitawo zvokudenha murume nokumubatabata pamberi. Kana wada kumusveta chombo zviri kwauri, unokwanisa kungogwadama mberi kwake wototanga hako kusveta uchitamba nacho. Ndiwe wachigezesa ndiwe unoziva kuti chiri sei.
Kana aitawo zemo anokubatawo ochitanga kukukisa kana kuita zvimwe. Kisa murume nomoyo wose, Rega mvura inaye. Kana ada kukubatisa madziro wakamufuratira wakakotama, makumbo akaparadzana ndezvake rega aite. Kana ada kuti usimudza rimwe gumbo wakamubatirira iye akangowana mabatire anongoruramisa wotohwa apinda, wava kutorhojewa. Mushawa zemo rinokwira kusvika mudenga asi zama kusajaidza murume kumhanyamhanya sokuti iRACE. Murume ngaaite discipline yokuzvipa Control. Iwe kana ine gumbo rimwe pasi pane mvura panotsvedzerera iye ana maviri, kuti uwanze chiuno zvinonetsa. Rega aite ega iwe uchingopiwa hako. Zvichibva nokuti kureba kwenyu kwakasiyana zvakadii, unokwanisa kumupa zamu iye haatani kuisa ruoko gwake pasi pemagaro ako kuti anyatse kupinda. Vhura makumbo apinde. Munotorhojana zvaunotohwa kuti basa ririkuitwa nomazvo pano. Iyawo mvura iri kunaya inowedzera zemo.
Kunaka zvinonaka asi unokwanisa kuita CRAMP. Ukahwa zvave kunetsa, furatira murume wokotama wakabata madziro. Unokwanisa kushandisa chuino wakadai.
Mapedza, torazve sipanji iya ugezese murume pamberi. Udza murume kunaka kwazvaita. Varume vanoda kuwana zvokuzvirova dundundu kuhi vagona basa. Kana agona muudze kuti agona. Kwete kungoti zii sokuhi wabatwa chibharo. Muyeuchidze kuti wakasarudza murume chaiye. Chidzima hako mvura utore tawero upukute murume. Ipapo anenge angoti rukutu Murume akapiwa anoda kumbozorora kwekanguva. Wamupukuta iwe wozvipukutawo modzokera kuimba yokuvata kune hembhe dzokupfeka. Kana achida kumboti vatei rega avate. Kana uchidawo kumbovata naye vatai. Inguva yenyu.
Panguva dzose gara une fungwa yokurongera murume. Zvimwe zvirongwa zvinoitika, zvimwe hazviitiki asi munhu akachenjera anogara ane zvirongwa kwete kungomirira kuhi padira murume. Nguva yamunopedza mese muri pamwe inguva inokuswededzaiwo pedo pamoyo yenyu nerudo. Kozoti ukaona murume ane chombo chimire usamurega achiinda. Unokwanisa kumubvunza kuti ari kuda mushonga wacho here, wotomurongera ipapo. Taridza WILLINGNESS yokubatsira pawangoonera izvi.
Kare vana tete vaitiudza kuti zvokudya zvinobikwa sei toita nguva tichidzidzira zvomukicheni. Mazuvano mabhuku, maMagazine, maAdverts, ma firimu, mavidhiyo mutauro wevanhu, maTV program, zverse zvine zvinhu zvinongotaridza kurhojana mazviri. Varume vedu vanongogaroyeuchidzwa kurhoja, Saka isu ngatifungewo nazvo tisasarira shure. Sadza ndiro haro asi kuhi mukadzi wanhingi zvinotoreva kuti chitubu chaunacho ndechokusheya nanhingi wacho iyeye. Sadza nderokumupa kuti awane samba rokurhojana. Ngatisakangamwa ipapo.
Wava umwewo musi ukangoti Hendei tinogeza, murume anobva atiziva kuti akangosimuka achikutevera anozodzoka matomboita zvimwe zviitwa. Imwe neimwe imba ine mutauro wayo wekuudzana nechibhende kuti ngatirhojane. Ziva chibhende chomumba mako.
Kana mumba menyu musina bhavhu kana shawa, muchiita zvokugezera mubhaketi, still munokwanisa kugezesana muimba yokugezera iyoyo. Mageza mese motorana nezemo renyu modzokera pamubhedha mupedza zemo. Musambofunga kuti vane dzimba huru ndivo vanodanana kukupfuurai. Hazvisirizvo, inongova nguva yakasiyana.
Kana mune mita yemvura, kukapera mwedzi umwe chete muchigeza mese, muchaona kuti mutero wemvura unoita mushoma ipapo mawedzera kurhojana kwenyu.
tambaoga jerenyenje said...
mazviita tete ndadzidza murambe makadaro nedzidziso inovaka musha yedu
8 November 2016 at 12:29